Nokia 7.2 agbaala na Geekbench na Snapdragon 710 | Gam akporosis
Geekbench abịala ọzọ iji nye anyị nkọwa ndị ọzọ banyere ekwentị na-abịanụ, nke sitere na HMD Global. Ngwaọrụ anyị na-ezo aka n'oge a bụ Nokia 7.2, nke anyị kwurula banyere ya na nke ga-abịa na usoro foto foto na-adọrọ mmasị.
A ga-ekwuputa njedebe ahụ n'oge na-adịghị anya, ihe egosiri na ọtụtụ nkwụsị na nkwupụta emere n'oge na-adịbeghị anya. Tupu nke ahụ emee, ọtụtụ njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ ababeghị ya nke ọma site na enweghị ha ... opekata mpe ọ bụghị n'ọnọdụ asịrị ha. Ugbu a, iji zuo ma kwado ụfọdụ n'ime ndị a, akara e depụtara edepụtara ya na ntanetị nyocha ya na ụfọdụ n'ime àgwà ya. Ka anyị hụ ihe onye nrụpụta Finnish na-echere anyị!
Geekbench na-eme ka anyị mara na Nokia 7.2 nwere isi asatọ Qualcomm chipset (nke kwesịrị ịbụ Snapdragon 710) na oge elekere nke 1,84 GHz. SoC a jikọtara ya na 6 GB nke RAM ma na-arụ ọrụ sistemụ arụmọrụ nke Android 9. Ihe ngosi ndị ahụ nyeere ya aka inweta 1.604 isi na otu-isi ule na 5.821 ihe na multi-isi ngalaba. Nsonaazụ a dị na onyinye ndị ọzọ dị n'etiti dị ka Ezigbo 3 Pro.
Nokia 7.2 na Geekbench
Ndị mmadụ na-ekwu otú ahụ Nokia 7.2 nwere ike iweta ya na ihuenyo IPS LCD 6.18 inch nwere mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080 na akụkụ 18.7: 9, nke ga-enwekwa nkwado maka HDR. 10. Ọnụ ahụ, na mgbakwunye, ga-enwe sistemu igwefoto okirikiri nke anyị ahụla na usoro Motorola G. Nke a ga-enwe ihe mmetụta sensọ atọ yana ọkụ ọkụ ọkụ.
Nokia 6.2 na 7.2 nwere ike ịbata na mbido Ọgọstụ
Otú ọ dị, naanị ihe esere eserese apụtawo na-egosi ya, ma ọ bụghị ihe osise ọ bụla na-akwado ya. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị nwere ike ịnata ụfọdụ ozi site na ụlọ ọrụ ahụ n'oge na-adịghị anya, nke ga-eme ọ bụghị naanị ikwu maka igwefoto dị na ekwentị, kamakwa nye anyị nkọwa ndị ọzọ gbasara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nokia 7.2 gosipụtara na Geekbench na 6 GB nke RAM na ụdị njirimara nke etiti
Google Maps na-enweta ụfọdụ atụmatụ nke Google Trips
A Xiaomi Mi A3 Pro nwere ike ịbịa n'oge na-adịghị anya